ရှုံးပွဲမရှိ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် U-16 လူငယ်အသင်း ယနေ့ Semifinal ကန်တော့မည်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Sports & Recreation » ရှုံးပွဲမရှိ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် U-16 လူငယ်အသင်း ယနေ့ Semifinal ကန်တော့မည်။
ရှုံးပွဲမရှိ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် U-16 လူငယ်အသင်း ယနေ့ Semifinal ကန်တော့မည်။
Posted by Burma on Jul 18, 2011 in Sports & Recreation | 11 comments
လာအိုနိုင်ငံတွင် ကျင်းပလျက်ရှိသော အရှေ့တောင်အာရှ U-16 2011 ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးတွင် ရှုံးပွဲမရှိ ရမှတ် ၁၀ မှတ်ဖြင့် အုပ်စုပထမရရှိကာ ဆီမီး ဖိုင်နယ်တက်ရောက်သွားသော မြန်မာလက်ရွေးစင် လူငယ်အသင်းသည် လာအိုလူငယ်အသင်းနှင့် ဇူလိုင် 18 ရက် (ယနေ့) တွင် ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမည်ဖြစ်သည်။ လာအိုလူငယ်အသင်းမှာအုပ်စုပွဲစဉ် တစ်လျှောက် နှစ်ပွဲသရေ နှစ်ပွဲနိုင် ရလာဒ်ဖြင့် ဆီမီးဖိုင်နယ်ကိုထိုင်း အသင်းနဲ့အတူ တက်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လာအိုလူငယ်အသင်း ဖြတ်ကျော်လာခဲ့သော ပွဲစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
လာအို 2-0 တီမော
လာအို 2-0 အင်ဒိုနီးရှား
လာအို 1-1 မလေးရှား
လာအို 1-1 ထိုင်း တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
မြန်မာအသင်းနည်းပြ မာကို ကမူ မြန်မာအသင်းကို အခြားအသင်းများက အထင်သေးကြကြောင်း ၊ ဒါပေမဲ့ ယခုအချိန်မှာ မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ ဘယ်လောက်အစွမ်းရှိတယ်ဆိုတာ ပြနိုင်တော့မှာဖြစ်ကြောင်း ၊ ဗီယက်နမ် အသင်းကို အနိုင်ရရှိပြီးဖြစ်တဲ့ မြန်မာအသင်းမှာ လာအိုနဲ့ပွဲမှာ ပိုမိုတောင့်တင်းပြီး ကစားပုံပိုကောင်းလာမည်ကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ကြွေးကြော်သွားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာအသင်းအနေနှင့် လာအိုအသင်းကို အနိုင်ရရှိပါက ဗိုလ်လုပွဲကြီးကို တက်လှမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်အနေနဲ့ မြန်မာလူငယ်အသင်း ကစားသမားများအနေနဲ့ Pressure မထားပဲ အားကုန် ထုတ်ကန်လာကြဖို့ ၊ ရှုံးလဲ ဘာမှမဖြစ်တဲ့အကြောင်း ၊ ပြောလိုက်ပါရစေ။
မြန်မာပရိတ်သတ်များကတော့ https://www.facebook.com/group.php?gid=214086027086 အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ Page မှာ ၀င်ရောက်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။
ပွဲအပြီးမှာ အဲဒိပေ့ခ်ျကလဲ သတင်းတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Live Score ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ http://www.futbol24.com/international/AFC/AFF-U16-Championship/2011/ မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
မြန်မာတွေ အတွက် ဂုဏ်ယူစ၇ာပေါ.
အစွမ်းအစ တစ်ကယ် ရှိတဲ့ တို့ မြန်မာ လူငယ်အသင်း ရဲ့ပြတ်ပြတ်သားသား အနိုင်ကန် မယ့် ပွဲစဉ် တစ်ခု ကို အားပေးမယ် ။
ပွဲ ပြီး ရင် သတင်းလေးတင်ပေးပါဦး နော .။
တချိန်တုန်းက ဗဟာဒူးတို့ .. တင်အောင်တို့ .. လှဌေး တို့ .. ဘပုတို့ကို လွမ်းတယ် ..
သူတို့ ကန်တဲ့အချိန်တုန်းက တို့က ၃-၄-၅ တန်းလောက်ပဲ ရှိသေးတာ ..
အိုလံပစ်မှာ အသန့်ရှင်းဆုံး ရခဲ့တာ မြန်မာအသင်းရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးမှတ်တိုင်ပါ ..
ရုံးရုံးနိုင်နိုင် ဒီလို ရလဒ်လေးတွေ မတွေ.မမြင်ရတာ ကြာပြီလေ….
…….. အောင်ပွဲခံရန် အသင့်ရှိနေပါသည်။
Result တွေကြည့်ရတာ အားရစရာပါ ။ မြန်မာအသင်း လာအိုအသင်းကို နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အရင်တုန်းကလို အသက် ၁၆ နှစ်အောက်ဆိုပြီး…အိုကြီးအိုမတွေ ခေါ်သွားပြီး ကလေးတွေနဲ့ ကန်တာတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်..။
မဟုတ်ပါ အာဂ ရေ . Burma တင်တားတဲ့ တခြား ပိုစ့်မှာ အားကစားသမားလေးတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံပါတယ် ကြည့်ကြည့်ပါလား ။
တို့မြန်မာနိုင်…….အဲ ရှုံးတယ်လို့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာရေးထား တာတွေ့တယ်…။
၀-၁ တဲ့ ။ ဒါဆို ဟိုဖက် က Singapore နဲ့ ကန်ရမှာလား Singapore ကThai ကိုဝ-၂ နဲ့ ရှုံးတယ်ဆိုတော့